क्यान निलम्बनकाे ३ बर्षः अझै गाँठाे फुकाउन कति समय कुर्ने ? | | Neplays.com
क्यान निलम्बनकाे ३ बर्षः अझै गाँठाे फुकाउन कति समय कुर्ने ?
By Neplays	 Last updated Apr 27, 2019
मलेसियामा भएको आइसीसी यू–१९ विश्वकपको एशिया छनोटको थप तयारीका लागि नेपाली टिम भारत गएकाे थियाे । भारत जानुअघि कीर्तिपुर क्रिकेट मैदानमा प्रशिक्षणमा रहेको टिम प्रशिक्षणमा पुग्दा प्रशिक्षक विनोद दाश एकदम दबावमा थिए, उनी भन्दै थिए, ‘पर्सि तयारीका लागि भारत जानुछ, अहिलेसम्म टिकट फिक्स भएको छैन । सबै जिम्मेवारी हेर्नुपर्ने भएकाले निकै कठिन छ । खेलाडीको प्रशिक्षण हेर, त्यसपछि उनीहरुको टुरका लागि सबै हेर्नुपर्यो, कहाँ बस्ने, कसरी जाने, टिकट मिलाउ, निकै कठिन छ काम । भन्नलाई पो प्रशिक्षक भन्ने हो, क्रिकेटको आधिकारीक निकाय भएको भए, यस्तो दबाव प्रशिक्षकलाई निकै कम हुन्थ्यो ।’
नेपाली क्रिकेटको आधिकारीक निकाय नभएको ज्वलन्त उदाहरण हो यो । यू–१९ टिमका प्रशिक्षक विनोद दाशलाई मात्र होइन, कुनैपनि अन्तराष्ट्रिय प्रतियोगिता अगाडी हरेक प्रशिक्षकले भोग्ने परिस्थिती हो यो ।
नेपाली क्रिकेट संघ आइसीसीको निलम्बनमा परेको आज ठिक तीन बर्ष पुगेको छ । आज भन्दा डेढ बर्ष अगाडी देखि क्रिकेटको निलम्बन फुकुवा हुन्छ भनेर बारम्बार भनिएपनि अझै कहिले हुन्छ, त्यसको अत्तोपत्तो छैन । आखिर नेपाली क्रिकेटको निलम्बन फुकुवाको गाँठो कता अड्किएको छ, त्यो राजको विषय छ ।
मिती २०१६, अप्रिल २६ तारिख, नेपाली क्रिकेटका लागि यो दिन कालो दिनका रुपमा रह्यो । बंगलादेशमा भएको टी–२० विश्वकपमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेर चर्चाको शिखरमा पुगेको नेपाली क्रिकेटबाट धेरैले आशा गरेका थिए, अब क्रिकेटले धेरै राम्रो गर्नेछ । तर त्यसका ठिक उल्टो हुन पुग्यो । विश्वकप खेलेको दुई बर्ष पनि नपुग्दै आइसीसीले नेपाली क्रिकेट संघ भित्रका पदाधिकारीको अहंमताका कारण निलम्बनमा पुर्यो ।
खेलाडीले बारम्बार पदाधिकारीको काममा असन्तुष्टी जनाइरहेका बेला र भविष्यमा जिम्बावे नहोस भनेर चेतावनी दिइरहदा पदाधिकारीको आफ्नो स्वार्थका कारण नेपालमा क्यानको ढोका बन्द भयो ।
एकातिर आइसीसीले क्यानलाई निलम्बनमा पार्यो । तर खेलाडीलाई अन्तराष्ट्रिय प्रतियोगिताहरुमा खेल्न रोक भने लगाएन । कारण नेपालमा क्रिकेटको क्रेज र खेलाडीको एकाग्रताले आइसीसीले पनि खेलाडीलाई मौकाबाट बञ्चित गरेन ।
नेपाली क्रिकेट संघको एक पक्षले आफ्ना निर्वाचित साधारण सभा गर्दा अर्का तिर राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले त्यसलाई मान्यता नदिएपछि तदर्थ समिती खडा गर्यो । जसलाई आधार मानेर आइसीसीले सरकारी हस्तक्षप गर्यो भनेर निलम्बनमा पार्यो । सुरुवातमा निलम्बनमा पर्दा दुई चार वटा सामान्य विवादहरु मिलेमा चाँडै फुकुवा हुन्छ भनियो । तर ६ महिना वित्यो, एक बर्ष वित्यो, दुई बर्ष वित्यो, हुँदा हुँदा तीन बर्ष वित्यो कहिले निलम्बन फुकुवा हुन्छ र क्रिकेटको आधिकारीक निकाय कहिले आउँछ र कहिले सबैकुरा मिल्छ भनेर एक बर्षदेखि कुरीरहेका खेलाडी, समर्थकहरु अझैपनि कुरि नै रहेका छन । तर त्यसको बाटो अझै अन्योल नै छ ।
नेपाली क्रिकेटको विवाद समाधान गरेर नयाँ संरचना तयारका लागि छुट्टै कमिटी बनाएर विधान संसोधन पनि गरियो, त्यसपछि निर्वाचन प्रक्रियाका लागि स्वतन्त्र कमिटी बनाएर राखिएको छ, छुटपुट रुपमा आइसीसीले नेपालको क्यानको समाधानका लागि चासो देखाउदै पत्र पठायो भनेर खवर आउछ, तर भित्रि रुपमा गाँठो कहाँ अड्कियो न त्यो निर्वाचित भनिएका पदाधिकारीलार्ई नै थाहा छ । थाहा छ त, केवल आइसीसीलाई ।
कहाँ अड्कियो गाँठाे
पछिल्लो पटक आइसीसीले क्रिकेट संघ अन्तर्गत रहेका जिल्ला संघको निर्वाचनका आधिकारीकताका विषयमा बुझेको थियो, त्यसपछि सबै जिल्लाको आधिकारीकता पछि प्रदेश र केन्द्रिय निर्वाचन निर्वाचनका लागि प्रक्रिया अगाडी बढाउन भनेको थियो । तर विचैमा यो काम अन्योलतामा बढ्यो । कारण यतिबेला आइसीसीले सो बेला क्यानमा रहेका पदाधिकारीको हिसावकिताव आफैले हेरीरहेको छ । क्यानको सम्पुर्ण आर्थिक विवरणका पाना केलाइरहेको आइसीसीले कुन पदाधिकारीको नाममा कति पेश्कि हिसाव बाँकि छ र कतिले फच्र्योट गर्यो त्यसलाई अध्ययन गरिरहेको छ ।
क्यान निलम्बन भएको तीन बर्ष हुँदा त्यो भन्दा अगाडी ८ बर्षदेखि पदाधिकारीले पेश्की लिएर फच्र्योट नगरेको हिसाव छ । जसमा सबै भन्दा धेरी जिल्ला संघ भन्दापनि ब्यक्तिको नाममा रहेको छ । पेश्की फच्र्योट नहुनेमा रकम एक लाख देखि १२ लाख रुपैयाँसम्म रहेको छ ।
सो बेला कुनै कामका लागि पैशा निकाल्ने तर समयमा फच्र्योट नगर्दा क्यान निलम्बन नहुँदा नै पदाधिकारीहरुको ठुलो आलोचना भएको थियो । तर त्यसलाई वेवास्ता गर्दै पदाधिकारीले पेश्की पुर्ण रुपमा फच्र्योट गरेनन् । अहिले आएर त्यहि हिसावकिताव घाँडो बनेको छ ।
चरणबद्ध रुपमा क्यानको निलम्बन फुकुवाका लागि पहल हुँदै गर्दा खेलाडीहरु अझैपनि चाँडै नयाँ बाटो क्रिकेटमा आउछ भनेर आशा गरिरहेका छन ।
क्यान निलम्बनका तीन बर्षमा चुकेका काम
क्यान निलम्बन भएपछि नेपालले कुनैपनि अन्तराष्ट्रिय प्रतियोगिता गर्न सकेको छैन । यो विचमा नामिविया र केन्या विरुद्ध घरेलु मैदानमा त खेल्यो, तर आइसीसीको प्रत्यक्ष संलग्नतामा भएको थियो ।
एसीसी यू–१९ र यू–१६ जस्ता उमेर समुहका न त राष्ट्रिय न त अन्तराष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिता नै भए ।
पुर्वाधारका हिसावले पनि क्यानले जुन किसिमको अगुवाई गर्नुपर्ने हो र अन्तराष्ट्रिय प्रतियोगिता आयोजनाका लागि पहल हुनुपर्ने हो त्यो शुन्य बन्यो । आइसीसीले जे भन्यो त्यो नै हवस भन्ने अवस्था बन्यो ।
आइसीसीको टी–२०, एकदिवसिय मान्यता पाउँदापनि घरेलु मैदानमा सिरीज गर्न १० पटक सोच्नुपर्ने अवस्था छ । यतिमात्र होइन, यति ठुलो मौकालाई क्यास गर्न निकै चुकेको छ । आइसीसीले कतै प्रतियोगिता दिलायो भने खेल्ने नभए चुप लागेर बस्नुपर्ने अवस्था छ ।
खेलाडीले पाउने हरेक सुविधा संकुचित भएका छन । चाहे त्यो प्रशिक्षणमा बस्दा होस या अन्य सुविधा । क्यान भएको खेलाडी घाइते हुँदा उपचारका लागि सजिलो हुने, क्याम्पमा हुँदा चाहिने आवश्यक कुरा माग्न सजिलो हुन्थ्यो । तर अहिले जे पनि आइसीसीको मुख ताकेर बस्नु पर्ने अवस्था आएको छ ।
खेलाडीकाे केन्द्रिय सम्झाैता छ छैन एकिन छैन, उनीहरूले मासिक तलव पाउन पनि बर्षाै कुर्नुपर्ने भएकाे छ।
भलिबल टिमले घरेलु काेर्टमा लज्जास्पद हारका साथ बाहिरीनुका कारणहरू